သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် Website ရှိခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြား သို့မဟုတ် နယ်မှ သင့် Customer များ သင့်ရဲ့ အင်တာနက်ရုံးခန်းသို့ ၀င်​​ရောက်​ကြည့်​ရှုလေ့လာနိုင်​ပါတယ်​။ website ပြုလုပ်​ခြင်းဖြင့်​ အောက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကုန်ကျစရိတ် များသော ပုံနှိပ် မီဒီယာများတွင် အတိုချုံး ရေးသားခြင်းဖြင့် ပုံနှိပ်ခနှင့် စာရွက်ဖိုး သက်သာစေပါတယ်။ ထိုစာရွက်ပေါ်တွင် မိမိတို့၏ Website လိပ်စာကို ထည့်သွင်း ပေးပါက ဝယ်ယူသူများမှ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်၏ Website တွင် လာ ရောက် လေ့လာနိုင်သောကြောင့် သင်၏ သတင်းစာ မဂ္ဂဇင်း လမ်းညွှန်​စာအုပ်​ အစရှိသည်​တို့တွင်​ ​ကြေငြာsize ချုပ်​နိုင်​ပြီး သင်​၏​ကြေငြာခကို သက်​သာ​စေပါတယ်​။ Website တွင်​လည်း သင်​၏လုပ်​ငန်းထုတ်​ကုန်​နှင့်​ ၀န်​​ဆောင်​မှုအ​ကြောင်းကို အကျယ်​တ၀င့်​​ဖော်​ပြနိုင်​ပါတယ်​။
Customer များအနေဖြင့် သင်၏ product and service အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန် Customer များအား website လိပ်​စာ​ပေးထားခြင်းဖြင့်​ website ထဲသို့ အလွယ်​တကူဝင်​​ရောက်​ကြည့်​ရှုနိုင်​ပါတယ်​။
ကိုယ်ပိုင် Website ရှိခြင်းသည် အခြားသူများအား သင့်အကြာင်းကို ပိုမိုသိရှိစေနိုင်ရန်နှင့် သင့်အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုများပိုမိုတိုးပွားလာစေနိုင်ရန် အကူအညီပေးပါတယ်။ Customer တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရယူရန် Website ကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။သင်၏ Visiting Card တွင်လည်း သင့်ကိုယ်ပိုင် Website Address ကို ထည့်ထားခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှုကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
6. Website ပြုလုပ်​ပြီး ​နောက်​ပိုင်း ထိုwebsite အား လူအများ သိရှိရန်​ ပြုလုပ်​နိုင်​ခြင်း
- social media ဖြင့်​​ကြေငြာနိုင်​ခြင်း
- search engine first page ဖြင့်​ ​ကြေငြာနိုင်​ခြင်း
- သတင်းစာ မဂ္ဂဇင်း လမ်းညွှန်​စာအုပ်​ ​အစရှိသည်​တို့တွင်​ ​ကြေငြာထည့်​ပါက website link ပါထည့်​သွင်း​ကြေငြာနိုင်​ခြင်း
- လက်​ကမ်းစာ​စောင် name card signboard ထုပ်​ပိုးသည့်​အိတ်​ ကား အစရှိသည့်​ လုပ်​ငန်းနှင့်​ သက်​ဆိုင်​​သော​နေရာများတွင်​ website လိပ်​စာကို ထည့်​သွင်း​ဖော်​ပြခြင်း စသည်​တို့ဖြင့်​ လူကြီးမင်းတို့ website ကို customer များပိုမိုသိရှိ​အောင်​ပြုလုပ်​နိုင်​ပါသည်​။
ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိသော website ကို ပြုလုပ်ပေးရန် Freelance Web Service မှ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Ph. (+95) 09795255283